Google ayaa hore u bixisay taariikh dhammaadka waafaqsanaanta nooca 2aad ee Baahinta Chrome | Laga soo bilaabo Linux
Xulka wararka oo dhan | 24/09/2021 19:53 | Noticias
Google ayaa soo saartay jadwal kaas oo uu ku faahfaahinayo sida Dhammaadka taageerada nooca 2 ayaa dhici doonta ka soo muuqashadeeda Chrome -ka ee doorbidaya nooca 3, kaas oo dab la qabadsiiyay si uu u carqaladeeyo qaar badan oo ka mid ah aaladaha amniga iyo xannibaadda waxyaabaha aan habboonayn.
Marka lagu daro ku darista nooca labaad ee muujinta, xannibiyaha xayeysiiska caanka ah ee uBlock Origin wuxuu ku xiran yahay, kaas oo aan loo wareejin karin nooca saddexaad ee muujinta sababta oo ah dhammaadka taageerada habka xannibaadda ee webRequest API.
Laga bilaabo Janaayo 17, 2022, plugins -ka isticmaalaya nooca labaad ee muujinta mar dambe laguma aqbali doono Dukaanka Shabakadda Chrome, laakiin horumariyayaashii hore ee lagu daray ayaa wali awoodi doona inay dhejiyaan cusboonaysiinta.
Janaayo 2023, Chrome wuxuu joojin doonaa inuu la jaan qaado nooca labaad muujinta iyo dhammaan fiilooyinka ku xiran waxay joojin doonaan shaqadooda. Isla mar ahaantaana, ku-dhejinta cusboonaysiinta waxyaabaha lagu daro ee Dukaanka Webka Chrome waa mamnuuc.
Horaantii sanadkaan, loogu talagalay Chrome 88, waxaan ku dhawaaqnay helitaanka nooc cusub oo cad oo loogu talagalay nidaamka deegaanka ee fidinta Chrome. Sannadaha samaynta, Manifest V3 ayaa ka ammaan badan, hufan, iyo xafididda asturnaanta marka loo eego kii ka horreeyay. Waa kobcinta madal fidinta oo tixgelinaysa muuqaalka webka ee isbedelaya iyo mustaqbalka fidinta biraawsarka labadaba.
Markaan fiirineyno mustaqbalka oo aan sii wadno ku celcelinta iyo wanaajinta shaqeynta Manifest V3, waxaan sidoo kale dooneynaa inaan wadaagno faahfaahinta qorshaha si aan uga baxno fidinta Manifest V2.
Waa inaan xusuusnaano taas nooca saddexaad ee muujinta, oo qeexaya kartida iyo kheyraadka in la siiyo plugins, taas oo qayb ka ah dadaalka lagu xoojinayo amniga iyo asturnaanta, halkii ay ahaan lahayd webRequest API, ku dhawaaqida NetRequest API, oo leh awoodo xaddidan, waa la soo jeediyay.
Iyadoo halkaa WebRequest API wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku xirto kantaroolayaashaaga kuwaas oo si buuxda u heli kara codsiyada shabakadda oo wax ka beddeli kara taraafikada duullimaadka, ku dhawaaqida NetRequest API waxay kaliya siinaysaa marin matoor shaandhayn ka baxsan sanduuqa lagu dhex dhisay biraawsarka kaas oo gacanta ku haya xeerarka xannibaadda. , taas oo aan kuu oggolaanaynin inaad isticmaasho algorithms -ka shaandhaynta kuu gaarka ah oo aan kuu oggolaanayn inaad dejiso xeerar adag oo midba midka kale is -dhaafsado iyadoo lagu salaynayo xaaladaha.
Markay taariikhahaani soo dhowaadaan, waxaan wadaagi doonnaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan nooca Chrome ee loogu talagalay isbeddelka, iyo sidoo kale macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida horumariyeyaasha fidinta iyo adeegsadayaasha ay u saameyn karto.
Dhanka kale, waxaan sii wadi doonnaa inaan ku darin kartiyo cusub Manifest V3 oo ku saleysan baahida iyo codadka bulshada horumariyaha. Xitaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, waxaa jiray tiro ballaarinta xiisaha leh ee madal fidinta.
Sida laga soo xigtay Google, waxay sii wadaa inay ka shaqeyso hirgelinta awoodaha cadeynta NetRequest ee looga baahan yahay plugins -yada adeegsada webRequest, waxayna damacsan tahay inay API -ga cusub u keento qaab si buuxda u daboolaya baahiyaha soosaarayaasha soo -saareyaasha jira.
Bilaha soo socda, waxaan sidoo kale sii deyn doonnaa taageerada qoraallada nuxurka leh ee la isku hagaajin karo iyo ikhtiyaarka kaydinta-xusuusta, oo ka mid ah awoodaha kale ee cusub. Isbeddeladaan waxaa loo naqshadeeyay iyada oo maskaxda lagu hayo ra'yi -celinta bulshada, waxaanan sii wadi doonnaa inaan dhisno karti dheeraad ah oo ka -shaqeynta Fidinta API maadaama macluumaad badan ay wadaagaan soo -saareyaashu.
Tusaale ahaan, Google waxay hore u tixgelisay rabitaanka bulshada waxayna ku darsatay kaalmo loogu talagalay ku dhawaaqista NetRequest API ee xeerar kala duwan oo kala duwan, shaandhaynta regex, wax ka beddelka madaxyada HTTP, wax ka beddelidda iyo ku darista xeerarka si firfircoon, ka saaridda iyo beddelidda xuduudaha. Codsi, shaandhaynta tab , iyo xeerka kalfadhiga-gaarka u ah abuuritaanka.
Bilaha soo socda, waxaa la qorsheeyey in la sii fuliyo taageerada qoraallada si firfircoon loo beddeli karo ee ka shaqaynta nuxurka iyo awoodda kaydinta xogta RAM.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Google ayaa hore u bixisay taariikh dhammaadka waafaqsanaanta nooca 2 ee Caddaynta Chrome
Xisaabinta Daruuraha: Codsiyada Ilaha Furan ee Hadda jira iyo Meelaha